လမ္းမွာအမွတ္တမဲ႔ေတာင္ မဆံုခ်င္တဲ႔ရည္းစားေဟာင္းနဲ႔ ဆုံမိတဲ႔အခါ ဘယ္လုိေျဖရွင္းၾကမလဲ? – Trend.com.mm
Posted on June 25, 2018 November 14, 2018 by Noel
ခ်စ္ရတဲ႔သူနဲ႔လမ္းခြဲျပီးတဲ႔ေနာက္မွာ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ရယ္ေတာ့မသိ ရည္းစားေဟာင္း နဲ႔ျပန္ေတြ ႔ရင္ ရွိန္သလိုလုိ၊ရွိဳးတုိးရွန္႔တန္႔ပဲျဖစ္ေနသလုိ ခံစားရပါတယ္။ဘာေျပာလုိ႔ေျပာရ မွန္းလည္းမသိေပါ့။ ကိုယ့္ကုိနာက်င္ေအာင္လုပ္ျပီးထားခဲ႔တဲ႔ရည္းစားေဟာင္းဆုိရင္ ဒီတစ္သက္ျပန္ေတာင္ မေတြ႔ခ်င္ေလာက္ေအာင္၊လမ္းမွာ အမွတ္တမဲ႔ေတာင္ မဆံုခ်င္ေလာက္ေအာင္ ဆုိသလုိပါပဲ။ဒါက မိန္းကေလးေရာ၊ေယာက်္ားေလးေရာ ခံစားရတာခ်င္းတူတူပါပဲတဲ႔။ခ်စ္ေနေသးတာျဖစ္ျဖစ္၊မုန္းေနတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ရည္းစားေဟာင္းနဲ႔ဆံုလာတဲ႔အခါ ဒီလုိခံစားခ်က္မ်ိဳးက ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ျပီးေတာ့ အဲ႔ဒီခံစားခ်က္ကလည္း မေကာင္းဘူးဟုတ္! 😞ရည္းစားေဟာင္းဆုိတာ ကုိယ့္ရဲ႔ ဒုိင္ယာရီထဲက စာမ်က္ႏွာတစ္ရြက္လုိပဲ။ျပန္ဖတ္တဲ႔အခါမွာလည္းျပန္ထိရွတာမ်ိဳး! ျဖဲပစ္မလားဆုိေတာ့လည္း စာအုပ္ေလးမလွေတာ့မွာစုိးလုိ႔ မျဖဲပစ္ရက္တဲ႔ခံစားခ်က္မ်ိဳး !
ရတတ္ပါတယ္။တကယ္လု႔ိ သင္ေရာ သင့္ရည္းစားေဟာင္းနဲ႔အမွတ္တမဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ လာဆုံျပီဆုိပါေတာ့။ဘာလုပ္ဖုိ႔စဥ္းစားထားလဲ?သူကုိယ့္ကုိမေတြ႔ေသးခင္ ေရွာင္ေနလိုက္မလား။ဒါမွမဟုတ္ခပ္တည္တည္ပဲေနလုိက္မလား။မ်က္နွာခ်င္းဆုိင္ၾကီးဆံုျပီးကာမွျဗဳန္းဆို ထြက္ေျပးပုန္းေနဖို႔ဆုိရင္ေတာ့ဒါက ေကာင္းတဲ႔အၾကံတစ္ခုမဟုတ္ဘူးေနာ္။၂၀၁၀ တုန္းကေလ့လာထားခ်က္အရ သင္ခ်စ္ခဲ႔ဖူးတဲ႔သူ၊သင့္ကုိလမ္းခြဲသြားတဲ႔သူကုိ အမွတ္တမဲ႔ေတြ႔တာျဖစ္ျဖစ္၊တမင္ေတြ႔ဆံုတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပန္ေတြ႔ရင္ေတာင္ ရင္ထဲမွာ နာက်င္ေနတုန္းပဲလို႔ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ဒါေပမဲ႔ ကံေကာင္းစြာနဲ႔ သင့္ရဲ ႔ရည္းစားေဟာင္းနဲ႔
ျပန္ဆံုေတြ႔ရင္ ေအးေအးေဆးေဆးနဲ႔ႏႈတ္ဆက္ႏုိင္ေအာင္၊ရည္းစားေဟာင္းကုိ အလွပဆံုးျပံဳးျပႏႈတ္ဆက္ႏုိင္ေစမယ့္ နည္းလမ္းေလးေတြကုိရွာေတြ႔ထားပါတယ္။
🍀 ရည္းစားေဟာင္းနဲ႔အမွတ္တမဲ႔ဆံုလာခဲ႔ရင္ အလွပဆံုးျပံဳးျပႏႈတ္ဆက္ႏုိင္ၾကပါေစေနာ္ 🍀
ချစ်ရတဲ့သူနဲ့လမ်းခွဲပြီးတဲ့နောက်မှာ ဘာအကြောင်းကြောင့်ရယ်တော့မသိ ရည်းစားဟောင်း နဲ့ပြန်တွေ ့ရင် ရှိန်သလိုလို၊ရှိုးတိုးရှန့်တန့်ပဲဖြစ်နေသလို ခံစားရပါတယ်။ဘာပြောလို့ပြောရ မှန်းလည်းမသိပေါ့။ ကိုယ့်ကိုနာကျင်အောင်လုပ်ပြီးထားခဲ့တဲ့ရည်းစားဟောင်းဆိုရင် ဒီတစ်သက်ပြန်တောင် မတွေ့ချင်လောက်အောင်၊လမ်းမှာ အမှတ်တမဲ့တောင် မဆုံချင်လောက်အောင် ဆိုသလိုပါပဲ။ဒါက မိန်းကလေးရော၊ယောကျ်ားလေးရော ခံစားရတာချင်းတူတူပါပဲတဲ့။ချစ်နေသေးတာဖြစ်ဖြစ်၊မုန်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ် ရည်းစားဟောင်းနဲ့ဆုံလာတဲ့အခါ ဒီလိုခံစားချက်မျိုးက ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ပြီးတော့ အဲ့ဒီခံစားချက်ကလည်း မကောင်းဘူးဟုတ်! 😞ရည်းစားဟောင်းဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ ဒိုင်ယာရီထဲက စာမျက်နှာတစ်ရွက်လိုပဲ။ပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းပြန်ထိရှတာမျိုး! ဖြဲပစ်မလားဆိုတော့လည်း စာအုပ်လေးမလှတော့မှာစိုးလို့ မဖြဲပစ်ရက်တဲ့ခံစားချက်မျိုး !
သိထားရမှာကလောကကြီးက ကျဉ်းကျဉ်းလေးပါ။ တစ်ကွေ့မဟုတ် တစ်ကွေ့တော့ပြန်ဆုံ
ရတတ်ပါတယ်။တကယ်လို့ သင်ရော သင့်ရည်းစားဟောင်းနဲ့အမှတ်တမဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် လာဆုံပြီဆိုပါတော့။ဘာလုပ်ဖို့စဉ်းစားထားလဲ?သူကိုယ့်ကိုမတွေ့သေးခင် ရှောင်နေလိုက်မလား။ဒါမှမဟုတ်ခပ်တည်တည်ပဲနေလိုက်မလား။မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြီးဆုံပြီးကာမှဗြုန်းဆို ထွက်ပြေးပုန်းနေဖို့ဆိုရင်တော့ဒါက ကောင်းတဲ့အကြံတစ်ခုမဟုတ်ဘူးနော်။၂၀၁၀ တုန်းကလေ့လာထားချက်အရ သင်ချစ်ခဲ့ဖူးတဲ့သူ၊သင့်ကိုလမ်းခွဲသွားတဲ့သူကို အမှတ်တမဲ့တွေ့တာဖြစ်ဖြစ်၊တမင်တွေ့ဆုံတာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြန်တွေ့ရင်တောင် ရင်ထဲမှာ နာကျင်နေတုန်းပဲလို့တွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ကံကောင်းစွာနဲ့ သင့်ရဲ ့ရည်းစားဟောင်းနဲ့
ပြန်ဆုံတွေ့ရင် အေးအေးဆေးဆေးနဲ့နှုတ်ဆက်နိုင်အောင်၊ရည်းစားဟောင်းကို အလှပဆုံးပြုံးပြနှုတ်ဆက်နိုင်စေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကိုရှာတွေ့ထားပါတယ်။
လမ်းခွဲပြီးပြီ၊အချိန်ကာလလည်းအတော်အတန်ကြာပြီဆိုရင်တော့ သင့်ရည်းစားဟောင်းနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလားစဉ်းစားပါ။တကယ်လို့များလမ်းမှာ မတော်တဆဆုံခဲ့ရင် ဘာပြောမလဲ၊သူကရော ဘာပြောမလဲပေါ့။နည်းလမ်းကတော့ ရည်းစားဟောင်းရှေ့ကနေ အယဉ်ကျေးဆုံးရှောင်ထွက်နိုင်ဖို့ ယေဘူယျတဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ချို့ကိုစဉ်းစားထားပါတဲ့။ လေ့ကျင့်ထားပါ။အလေ့အကျင့်ရှိတော့ ရုတ်တရက်ဆုံလာရင်တောင် နေသားကျပါလိမ့်မယ်။ဥပမာ ဘာတွေလုပ်နေလဲ၊အလုပ်လုပ်ရတာအဆင်ပြေလားဆိုတာမျိုးပေါ့။လမ်းခွဲတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး
Say hello first! ရည်းစားဟောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါ သင့်ကိုယ့်သင်မရှိသလို ပုန်းနေဖို့မလိုပါဘူး။ အရေးကြီးတာက စိတ်ကို သေချာငြိမ်အောင်ထားဖို့ပါပဲ။ ရည်းစားဟောင်းနဲ့တွေ့လို့ စိတ်လှုပ်ရှားပြီးအယောင်ယောင်အမှားမှားဖြစ်နေရင် သူ့ဘက်က သင်ကသူ့အပေါ် ခံစားချက်တွေကျန်နေသေးမှန်းသိသွားပြီးသင့်ကို အားနာသလိုလုပ်ရင် ဒါကသင့်ကိုပိုပြီး ခံစားရဆိုးစေပါတယ်။
သူနဲ့တွေ့ရင်ဘာပြောရမလဲ၊ဘာမေးရမလဲ ကြိုတင်မစဉ်းစားထားဘူးဆိုရင်တော့ ဒီနည်းလမ်းကို သုံးပါ။”နှုတ်ဆက်ပါ။ဘာတွေလုပ်နေလဲ၊ဘာညာစကားစမြည်ပြောပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ စကားတစ်ခုခုနဲ့ နှုတ်ဆက်ပြီးရှောင်ထွက်ပါ”။ဘယ်သူမှ ရည်းစားဟောင်း နဲ့အကြာကြီး စကားပြောရမှာ နှစ်သက်မယ်မထင်ပါဘူးနော်။
ကဲ ကဲ ရည်းစားဟောင်းနဲ့ဘားတွေ၊ပါတီတွေမှာဆုံလာရင် အရက်ကိုအမုန်းသောက်မယ် ၊ကဲမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးကိုဖျက်လိုက်ပါတော့။အရက်က စိတ်ခံစားချက်ကိုထွေပြားစေပါ တယ်။ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကိုလည်းပျော့လာစေပါတယ်။သူက သောက်ဖို့အဖော်စပ်ရင်တောင် ချိုချိုသာသာငြင်းပြီးရှောင်ပါ။
တကယ်လို့များကိုယ့်ရည်းစားဟောင်းက တစ်ခြားတစ်ယောက်နဲ့ပလူးပလဲနေတာကိုမြင်ခဲ့ရင် သဝန်တိုစိတ်နဲ့ ဘာမှမတုံ့ပြန်မိပါစေနဲ့။ရည်းစားဟောင်းဆိုတာကိုအမှတ်ရပါ။ ကိုယ့်ကိုထားခဲ့တဲ့ရည်းစားဟောင်းကြောင့် ဒေါသထွက်နေရင် နှစ်ခါရှုံးတာပါပဲ။ကိုယ့်ရှေ့မှာ ဘယ်သူနဲ့ပဲ Q နေ Q နေ လေးစားမှုနဲ့အယဉ်ကျေးဆုံးဆက်ဆံပြုမူပါ။ဒါက ကိုယ့် Role ကိုယ်မြှင့်တဲ့သဘောပါပဲ။
ရည်းစားဟောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါ ရင်တွေပရမ်းပတာခုန်ပြီး ချွေးစီးလက်စီးတွေထွက်၊ဘာလုပ်ရမှန်း မသိဖြစ်မနေပါနဲ့။ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိပါ။သူထားခဲ့တာဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊လမ်းခွဲခဲ့တာဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်က ကိုုယ့်ဘဝထဲမှာ ဘုရင်မပါ။ဒါကိုမမေ့ပါနဲ့။ ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ပြောဆိုပြုမူပါ။
🍀 ရည်းစားဟောင်းနဲ့အမှတ်တမဲ့ဆုံလာခဲ့ရင် အလှပဆုံးပြုံးပြနှုတ်ဆက်နိုင်ကြပါစေနော် 🍀